कोशीमा उच्च बाँधको जोखिम मोलेरै... :: भानुभक्त :: Setopati
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, चैत २६
नेपाल फ्रेट फर्डवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा यो जलमार्गको प्राविधिक र व्यवसायिक अध्ययन नभएकोले अहिले नै यसको उपयोगिताबारे एकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘हाम्रा नदीमा पानीको गहिराइ र चौडाइ, त्यसका लागि आवश्यक नहरको निर्माणजस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान बिना जलमार्गको उपयोग बारेमा धेरै बोल्न सकिन्न’ शर्माले भने।
यी विषयको टुंगो नभएकाले नेपाललाई लाभ वा हानी कति हुनसक्छ भन्न नसकिने शर्माले बताए।
बंगलादेशको ब्रह्मपुत्रमा जलमार्गसम्बन्धी आयोजनामा काम गरेका विज्ञ ध्रुव श्रेष्ठ भने गंगासँग नेपालका नदी जोडेर कार्गो ल्याउन प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा फाइदा नहुने बताउँछन्।
भारतमै गंगाजस्तो ठूलो नदीको जलमार्ग उपयोगमा प्रश्न उठेको सन्दर्भमा नेपालले गंगाभन्दा धेरै साना आकारका नदीमा जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने कुरा सफल नहुने उनको श्रेष्ठको तर्क छ।
‘गंगा नदीमा पनि ठूलो मात्रामा व्यवसायिक जल यातायातको सम्भावना नभएकाले भारतले त्यहाँ सानो आकारका फिडर जहाजमात्र चलाउने सोच बनाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘गंगामै मिसिने साना नदीमार्फत् त्यही जलमार्गको प्रयोग गरेर हामीले सामान ढुवानी गर्छौं भन्नु भ्रममात्र हो।’
कार्गो जहाज चलाउन नेपालका नदीमा बाँध बाँधेर नहर बनाउनु पर्ने र त्यो नहरमार्फत् त्यस्ता जहाज नेपाल ल्याउनु पर्ने भएकाले त्यो काम आफैंमा कठिन र धेरै खर्चिलो भएको श्रेष्ठको तर्क छ।
सामान्य फिडर कार्गो जहाज चलाउन कम्तिमा पनि नदी वा नहर ६ मिटर चौडाइ र ४ मिटर गहिराइको हुनपर्छ। त्योभन्दा ठूलो आकारको पानीजहाज आउन ८ मिटर चौडाइ र ६ मिटर गहिराइको पानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालबाट बग्ने एउटै नदीमा पानीको त्यत्रो मात्रा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘जहाज चलाउने भनेको बर्खामा मात्र होइन, बाह्रै महिना हो। नेपालमा कुन नदी छ, जहाँ त्यति ठूलो नहर बनाउने पानी हुन्छ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
जहाजमार्फत् कन्टेनर ल्याउनका लागि बाँध बाध्ने काम आफैंमा विवादित विषय हो। कोशीमा बनाउने भनिएको उच्च बाँधले हजारौं परिवार विस्थापित हुने र नेपालमा बाढी र पहिरोको आतंक सिर्जना हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। कोशीमा अग्लो बाँध बाधेर कोशी बहुउद्देश्य परियोजना बनाउने भारतीय आकांक्षा त्यही विरोधले स्थगित हुँदै आएको छ।
कोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने आफ्नो योजनामा नेपालको साथ पाउने सम्भावना देखेर भारतले जलमार्ग उपयोगको प्रस्तावमा उत्साहपूर्वक समर्थन गरेको कतिपयको आँकलन छ।
कोशीमार्फत् पानीजहाज ल्याउन कोशीमा उच्च बाँध अनिवार्य हुने व्यवसायी अविनाश बोहरा बताउँछन्।
‘कोशीको अहिलेको पानीले बाह्रै महिना कार्गो भेसल आउन सक्ने नहर बनाउन सम्भव हुन्न। कार्गो भेसल ल्याउन त्यहाँ उच्च बाँध बनाउनै पर्छ,' उनले भने।
भारतले धेरै अघिदेखि नै कोशी बहुउद्देश्य परियजनाका लागि सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि उत्तरतिर १.५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म २५० मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
बाँध बनाएर खोला थुन्ने कामको भारतमै पनि बिरोध हुँदै आएको छ।
केन्द्रीय सरकारको गंगा जलमार्ग परियोजनाको बिहारमा विरोध भइरहेको छ। पर्यावरण बिग्रिने, ठाउँठाउँमा बन्ने बाँधको कारण बाढीको जोखिम बढ्ने र त्यसले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने भन्दै बिहारका धेरै सांसदहरूले सो आयोजनाको विरोध गरिरहका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा जलमार्गको उपयोग कति सहज र सम्भव होला?
आन्तरिक तयारी र आधारभूत अध्ययनबिना भारतसँग जलमार्गको कुरा उठाइएकोले यो अन्योल देखिएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
“उच्च बाँधको जोखिम मोल्न हामी तयार हो वा होइन? हाम्रा नदीमा प्राविधिक हिसाबले र व्यवसायिक लाभ लिने गरी जहाज चलाउन सकिन्छ वा सकिन्न?’ ती अधिकारीले भने ‘ यी विषयमा आन्तरिक छलफल र अध्ययन गरेर मात्र भारतसँग जलमार्ग उपयोगको कुरा उठाउनु पर्थ्यो।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४, ०२:१०:११